Association nke sayensị metụtara - WRSP
NKWUKWU NDEN KWESSR SC KWES SCR SC
1919 (Septemba 25): Avraam Michelssohn, onye ga-emesịa wepụta aha Viktor Pavlovič Svetlov, mụrụ na Moscow, Russia.
1975 (Eprel 17): Oleg Viktorovich Maltsev mụrụ na Odessa, Ukraine. N’otu afọ ahụ, ya na ezinụlọ ya kwagara Sevastopol, Crimea.
1992: Maltsev gụsịrị akwụkwọ na Moscow Cadet Corps, yana Svetlov dị ka onye ndụmọdụ ya.
1992: Svetlov guzobere na Moscow TOROSS (Complex Territorial Analytical Consulting Agency).
1998: Maltsev guzobere na Vienna Institutelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Sayensị "Russian Science in Europe."
1998 (Eprel 27): Svetlov nwụrụ na Moscow n'ihe mberede ụgbọ ala.
2009: Maltsev hiwere na Sevastopol, Crimea, Crimea Research Base. Ọ kwụsịrị ọrụ ya na 2014.
2014: Tupu ọrụ Russia na Crimea, Maltsev na ndị na-eso ụzọ ya si na Sevastopol gaa Odessa.
2014: Maltsev zutere ọkà n'akparamàgwà mmadụ Mikhail Vygdorchik, onye kụziiri ya nkuzi nke Leopold Szondi nke Schicksalsanalyse (Fate Analysis) wee bụrụ onye nkuzi ya.
2014-2016: Na "Odessa Cult Wars," Sciencestù Na-ahụ Maka Ahụ Ike metụtara ndị Ukraine na ndị Russia na-emegide òtù nzuzo.
2015 (Eprel 6): International Schicksalsanalys Community Research Institute guzobere na Odessa.
2016 (June 14): E guzobere Memlọ Ọrụ Memory Research Memory na Odessa.
2017 (Jenụwarị 24): establishedlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Sayensị nke World Martial Arts Traditions Study na Criminalistic Research on Weapon Handling ka e guzobere na Odessa.
2017 (June 26): Maltsev nwetara Ph.D. na Psychology sayensị na Odessa State University.
Sciencestù Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụhụ abụghị usoro okpukpe. Agbanyeghị, nkuzi ya, nke sitere na akparamaagwa, gbasaruo mpaghara ime mmụọ na mysticism. N'ihi ihe ndị a kọwara na nkebi bụ́ “Esemokwu / Nsogbu,” malite na 2014 gawa, ọ ghọrọ ebe ndị òtù nzuzo Ukraine na Russia na-emegide òtù nzuzo, bụ́ ndị kpọrọ ya “òtù okpukpe ụgha.”
Oleg Maltsev mụrụ na Eprel 17, 1975 na Odessa, Ukraine, site na nne na nna ndị Juu. Ezinụlọ ya kwagara Sevastopol, Crimea, mgbe ọ dị nanị ọnwa anọ. Ukraine dị mgbe ahụ na Soviet Union. Youngmụaka Maltsev kwadebere maka ọrụ agha ma gụọ akwụkwọ na Moscow na Moscow Cadet Corps. Na Moscow, ọ zutere Viktor Pavlovič Svetlov (1919–1998), onye ghọrọ onye ndụmọdụ ya, wee kuziere Maltsev “nkuzi mgbe ochie” (lee anya n’okpuru, “Nkwenye.”). [Foto dị n'aka nri] Aha ezigbo Svetlov bụ Avraam Michelssohn, o sikwa n'ezinụlọ ndị Juu a ma ama. "VP Svetlov" abụrụla aha ya mgbe ọ na-arụ ọrụ maka ọgụgụ isi Soviet, ọ kpebiela idebe ya.
Maltsev nwere mmụọ miri emi site na Svetlov, ruo taa ọ na-ele ya anya dị ka ezi onye guzobere mkpakọrịta dị iche iche o guzobere. Na 1992, Maltsev gụsịrị akwụkwọ na Moscow Cadet Corps. Ọ mụtakwara iwu na Moscow ma mee iwu kemgbe 2005. Ọ malitere ụlọ ọrụ iwu nke ya na Ukraine na 2014. Mgbe e mesịrị, na 2017, ọ ga-enweta Ph.D. na Psychology sayensị na Odessa State University.
N'otu afọ ahụ, 1992, Svetlov guzobere na Moscow TOROSS (Complex Territorial Analytical Consulting Agency), ụlọ ọrụ na-ahụ maka nzuzo ebe Maltsev rụkwara ọrụ. Maltsev wee hiwe na 1998 na Vienna nke Scientific Research Institute "The Russian Science in Europe," na na 2009, The Crimea Research Base na Sevastopol, nke na-arụ ọrụ ruo 2014. Ọ kwagara Odessa na 2014, ya na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ dị mkpa, tupu Russia na-arụ nke Crimea.
Ka ọ na-erule oge ngagharị a, Maltsev nọ na-eme nyocha ma na-enye ọmụmụ na nzukọ ọmụmụ na ọtụtụ isiokwu, site na akparamaagwa na azụmaahịa na mysticism. Kwaga Odessa dabara na esemokwu mbụ ya na ndị na-emegide òtù nzuzo. O nyekwara Maltsev ndị mba ọzọ, na mba ụwa, ndị na-ege ntị maka ọmụmụ ihe ya, nke tụrụ aro ka a hazigharịa ihe omume ya na ngalaba atọ dị iche iche, nke etinyebere na akụrụngwa, nka agha, na nkuzi mmụọ, jikọtara n'okpuru nche anwụ nke Applied Sciences Association. (nke etinyere dika Association nke Science Sciences nke Institutes), ya bu International Schicksalsanalyse (Fate Analysis) Community Research Institute, Scientific Research Memory Institute na The Scientific Research Institute of World Martial Arts Traditions Study and Criminalistic Research on Weapon Handling.
E nwere ụzọ isi atọ nke ihe Maltsev na-ahọrọ ịkpọ "nyocha sayensị" karịa tiori ma obu nkuzi: nke uche, nke aru, na nke ime mmuo. Maka mmezu nke ndị ọkachamara na ọrụ ndị ọzọ, Maltsev [Foto dị n'aka nri] na ndị na-eso ụzọ ya na-akụzi nkuzi akpọrọ na "Pastament" nke Russia (n'ụzọ nkịtị, n'asụsụ Bekee: ntọala). Maltsev kwuru na ya mụtara nkwenkwe a site na Svetlov nakwa na ọ bụ akụkụ nke sayensị karịa okpukpe. A na-akọwa “Pastament” dị ka sayensị banyere ndụ, na-atụ aro ịbịakwute azịza nke ọrụ ndị na-eme ka mmadụ nwee ike ịdị na-arụ ọrụ oge niile (Maltsev 2014b; ngalaba a gbasara nkuzi gbadoro ụkwụ na mkparịta ụka gbara ọkpụrụkpụ na Oleg Maltsev na ụfọdụ n’ime ogologo oge ya ụmụ akwụkwọ na 2016, 2017, na 2018). "Ihe ochie" bụ sayensị nke ntinye ọrụ, na-akọwa mmekọrịta nke onye ọ bụla na onwe ya na ụwa, yana mmekọrịta dị n'etiti akụkụ onwe na nke Chukwu. Ejighi mara onwe ya, kama ọ bụ imeziwanye onwe ya. Ọ bụghị banyere omume ọma mana arụmọrụ: ọ naghị agụpụta omume dị ka ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, mana dị ka ọ dị irè na enweghị isi.
Onye ọ bụla kwesịrị ịrụ ọtụtụ ọrụ na ndụ ya. Ọtụtụ na-enweghị nkà zuru oke iji nagide ọtụtụ ọrụ, ma dabere na ma ọ dị oke egwu na nrụgide siri ike. Inwe mmetụta maka ọrụ ndị ahụ na-eme ka nrụgide ahụ dịkwuo elu, a na-emekwa ka anyị rụọ ọrụ ahụ n'oge dị mkpirikpi. N'ịbụ ndị nrụgide na ngwangwa chere ihu, anyị chọrọ ngwaọrụ zuru oke, ihe ọmụma, na nkà. A na-egosipụta "pastament" dị ka azịza maka mkpa a site na usoro ngwaọrụ, nke a na-akpọ "Rastrub" na "Sector." "Rastrub" na-enye mgbagha na nghazi (nke metụtara ma ndị mmadụ ma ọha mmadụ), na "Ngalaba" na-enye ohere ịnagide nrụgide nke nrụgide na ngwa ngwa. Ngwá ọrụ dị mgbagwoju anya na nke dị elu nke mkpakọrịta na-enye bụ "Full-Diapason Technology," nke gụnyere ihe atọ: usoro ike ozi (IPS), nke na-azụlite nkà na njikwa ngwa ngwa dị egwu; usoro ime mmụọ zuru ụwa ọnụ (GPS), nke na-eme ka ikike onye ọ bụla nwee ike iguzogide nrụgide; na usoro ihe omuma ime mmụọ (HSS), nke esi amata ezigbo nsogbu ma dozie ya na nsogbu adịgboroja, nke na-esite na ntụgharị uche nke uche na nke uche, na-ewepu. Maltsev na-akọwa na, site na iji ngwongwo atọ a, ma ọ bụ ngọngọ nke teknụzụ ọnụ, onye ọ bụla nwere ike ịmara nka ndị dị mkpa, nweta nsonaazụ, ma merie osooso na nrụgide.
Isi ihe nke akụkụ a nke Maltsev nyocha na nkuzi bụ nka. Otú ọ dị, ịmụ nkà dị iche iche pụtara ịmụ ihe. Ozizi nke Maltsev nke ncheta dabere na ọrụ ndị ọkà mmụta Soviet Grigory Semenovich Popov na Alexei Samuilovich Yakovlev, ndị nọ na USSR site na 1930s na onye Svetlov bụ onye na-eso ụzọ. Popov na Yakovlev mere nyocha ha maka ndị agha Soviet yana n'okpuru mkpuchi nke nzuzo, a makwaara nkọwa ole na ole banyere akụkọ ndụ ha. Agbanyeghị, Maltsev kwenyere na ha bụ ndị nyere aka n'ọtụtụ imirikiti nke sayensị Soviet.
Popov kwusiri ike na ọzụzụ ọzụzụ. A na-eji usoro nhazi oge okike mepụta oge onye ọ bụla chọrọ ịma nka. Ọmụmaatụ, otu onye nwere ike ịmụta otú ụgbọala na otu ọnwa, mgbe ọzọ ga-achọ otu afọ. Popov kwenyere na ọdịiche ndị a nwere njikọ na ezinụlọ anyị na ndị nna nna anyị, ọ wee nwee echiche nke "echiche ndị nna ochie." N'echiche a, echiche Popov dị nso na nke Léopold Szondi (1893-1986), [Foto dị n'aka nri] onye Maltsev matara na 2014 site na ọkà n'akparamàgwà mmadụ Mikhail Vygdorchik. Na 2017, Maltsev na Vygdorchik gara ụlọ ọrụ Szondi nke Zurich, gara ileta ihe ngosi nka na ili Szondi, wee mepụta akwụkwọ akụkọ banyere ndụ ya na echiche ya.
Szondi bụ onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ nke onye Hungary bụ onye lanarịrị ogige ịta ahụhụ ndị Nazi nke Bergen-Belsen ma tụpụta ụzọ nke atọ nke akparamaagwa akparamaagwa na ncheta ọmụmụ, n'etiti Sigmund Freud (1856-1939) na Carl Gustav Jung (1875-1961). Szondi, enyi na enyi Freud na Jung nwere nkwanye ugwu, amachaghị dịka ha dị, agbanyeghị na "Szondi test" ya ka na-agbasakwa. Ọ bụ ule na-anya ụgbọ ala miri emi banyere ọmịiko, ebe egosiri foto ndị mmadụ na-arịa ọrịa ọgụgụ isi na "ndị mmụọ ọjọọ" na-arịa ọrịa na mmetụta ha. Szondi bịara bụrụ onye amaara ama mgbe ndị ọka ikpe Israel rịọrọ ya ka ọ nyochaa onye omekome agha Nazi bụ Adolf Eichmann (1906-1962) na ule ya.
Freud lekwasịrị anya na onye amaghị ihe ọ bụla na Jung na mkpokọta. Szondi nwere ihe ùgwù nye ezinụlọ ahụ amaghị ihe ọ bụla, na-ekwu na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ndị nna nna anyị nke ọtụtụ ọgbọ nọkwara na amaghị ama. N'ụzọ ụfọdụ, ndị nna nna anyị nọ n'ebe ahụ ma na-ekpebi ọtụtụ nhọrọ anyị. Agbanyeghị, mgbe anyị ghọtara nke a, anyị nwekwara ike ịgbanwe akara aka anyị ma ghara ịbụ nke ndị nna nna anyị ochie kpebiri n'ọhịa uche anyị (Hughes 1992). Maka Maltsev, mkpa dị mkpa nke Szondi's Fate Analysis na-adabere n'ịmụ usoro nke nwere ike inye aka ịgbanwe akara aka mmadụ.
O siri ike ịkọwapụta, na usoro Maltsev banyere akparamaagwa, ihe na-abịa site na Szondi na Popov, na, na enweghị mgbagha, ọ gụnyekwara ihe izizi nke ya. Site na usoro Popov, Maltsev nakweere ncheta na nkebi anọ: mmịpụta nke mkpali, mmịpụta nke ike, ihe ntụgharị na nsonaazụ.
Maltsev na-akụzi na, site na mpụga, ebe nchekwa na-egosi dị ka ihe mejupụtara ya, nke dị iche na nke siri ike. Enwere ụdị ihe anọ dị iche iche: “ụlọ ihe nkiri” (ọ bụ maka ọrụ onye ọ bụla), “circus” (maka nka), “agụmakwụkwọ” (maka ihe ọmụma) na “okpukperechi” (maka nkuzi). Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ụdị ihe anọ dị iche iche: "ọbá akwụkwọ" (enwere ike ịnweta ya ngwa ngwa iji dozie nsogbu nsogbu), "Archive" (usoro nchekwa nke data niile a chịkọbara n'oge ndụ anyị), "ụlọ ihe ngosi nka" (sistemụ arụmọrụ maka na-arụ ọrụ na phenomena), na “gallery” (sistemụ arụmọrụ maka ịrụ ọrụ na mmetụta uche).
Anyị na-ejikarị njikwa ebe nchekwa anyị site na usoro akpọrọ rekọm. Ijikwa kachasị mkpa rekọm a na-akpọ RCG, Ntughari Group Core, ma nwee ike ịrụ ọrụ na ngọngọ ebe nchekwa niile. Maltsev na-akụzi na RCG bụ ihe na-akpali akpali nke na-ahụ maka nka nke onye ọ bụla. Dabere na RCG, Maltsev na-amata ọdịiche dị n'etiti ụdị mmadụ atọ, ahaziri maka ịdị mfe nke ọrụ yana aha iche n'echiche nke "bandit," "knight" (maka ụmụ nwoke) ma ọ bụ "nwanyị" (maka ụmụ nwanyị), na "ihe na-atọ ụtọ."
N’otu n’ime “njem” ya, na Canary Islands, Maltsev kwubiri na RCG na-akọwa ọdịnihu mmadụ, ụdị nka ya, na otu ụzọ o si mezuo onwe ya. Ozugbo mmalite nke ihe mkpali, usoro ncheta na-eche banyere nkà ndị ọ gụrụ dị ka ikike. Enwere ikike na akpaka na mmuta, mana amamịghe amutara karịrị nke akpaka. A na-echekwa onyonyo nke ndị ọchịchị na palọrị pụrụ iche na canal nke RCG.
Mpaghara nke abuo ebe ndi oru sayensi na-aru oru metutara agha agha na ijikwa ngwa agha. [Foto dị n'aka nri] Dị ka e kwuru na mbụ, Maltsev nwere mmasị karịsịa n'ịmụ nkà, ma na-ele ngwá agha anya dị ka nnukwu ubi maka nyocha akụkọ ihe mere eme na teknụzụ nke usoro na teknụzụ. N'ihi nke a, ọ nwere ikike ụfọdụ ngwa ọgụ, bụ onye o kwenyere na ikike ya nwere ọgụgụ isi karịa okwu ike. Ndị a bụ ngwa agha ndị Italiantali a ma ama na Renaissance, gụnyere ndị Venice, na mma agha na ngwa ọgụ ndị ọzọ eji eme ihe na Spanish. Ewezuga ogige ndị Spen, Maltsev gụrụ akwụkwọ, gụnyere ya na nkuzi ya, ọdịnala ịgba agba sitere na Italy (Venetian, Palermitan, Neapolitan, na ụdị ndị ọzọ), Germany, Russia na mba ndị ọzọ. Ọ sụgharịrị ọtụtụ akwụkwọ edemede oge gboo banyere fencing Italiantali na Spanish. Ọ nyochakwara ịkụ ọkpọ, na onye isi akụkọ ọkpọ ọkpọ America na onye nchịkwa bụ Constantine "Cus" D'Amato (1908-1985), onye malitere ọrụ nke ndị mmeri, dịka Floyd Patterson (1935-2006) na Mike Tyson. Dị ka Maltsev si kwuo, onye gara mpaghara nke onye nchịkwa a ma ama ma nyochaa ebe nchekwa obodo, ụdị ọkpọ ọkpọ pụrụ iche nke D'Amato nwere ike ịlaghachi n'otu ụkpụrụ nke ịgba france Spanish a na-akpọ Ebele, na Italiantali Renaissance fencing na ngwá agha eji mara dị ka Neapolitan Style nke Spanish fencing (Maltsev na Patti 2017).
Maltsev kwubiri na amamihe oge ochie na nke furu efu banyere njikwa ngwa agha na-adị ndụ ebe a na-achọkarị: na ọdịnala mpụ nke ọtụtụ mba, site na South Africa (Maltsev 2017) na Russia (Maltsev 2016) na Italytali, site na Spain ruo Mexico (Maltsev na Rister 2016), Argentina, na Philippines. Mba ndị dị ka South Africa na Philippines nwere ihe ndị Europe na-ebubata na agbụrụ ha dị iche iche, mana isi ọdịnala ndị omekome mpaghara sitere na Europe site na colonialism. Ọ bụ ezie na o doro anya na ọ naghị akwado ojiji ha maka ebumnuche mpụ, Maltsev na-eme njem na ụwa niile iji wughachi ọdịnala nke ijikwa ngwa agha ma jiri ya mee ihe n'okpuru mpụ.
Usoro iji jikwa ụfọdụ ngwa agha, Maltsev kwubiri, mekwara ka ụfọdụ iwu okpukpe na chivalric mekwaa ka Renaissance na tupu, ma jikọọ ha na mmụọ ime mmụọ ha. N'akwụkwọ ndị o dere n'oge gara aga, ọ bụ ezie na ọ gbahapụrụ okpukpe a haziri ahazi, Szondi kwubiri na okwukwe dị mkpa maka njikọta ma kọwaa usoro nke ime mmụọ. Maltsev kwenyere na ọmụmụ nke ncheta nwere ike ịnye akụkụ mbụ nke usoro iwu maka esemokwu a Maltsev amụwokwa ihe nketa akụkọ ihe mere eme nke iwu ndị mọnk Katọlik na chivalric, yana ndị otu esoteric, dị ka ndị Franciscans, ndị Knight Templars, ndị Rosicrucians, na Order nke Knights nke Dinwenu anyị Jesus Christ (nke a makwaara dị ka Order nke Kraist). Maltsev na-ekwu na, site n'ọmụmụ ya nke oge ochie na ihe omimi oge a, ọ nwere ike gosipụta na iwu okpukpe Katọlik, ọkachasị ndị Franciscans, achọpụtala ma kuzie ụkpụrụ ndị bụ isi gbasara ncheta na akara aka nke Szondi mechara bụrụ ndị ọsụ ụzọ. n'okwu sayensị nke oge a.
Akụkụ nke atọ nke nyocha na nkuzi nke Maltsev bụ, n'eziokwu, ọnọdụ ime mmụọ na mysticism (Maltsev 2014a). O kwenyere na ọ gaghị ekwe omume ịkọwa edemede nke "Chineke" na "mmụọ" na-atụleghị njikọ ha. Ọ bụ ebe nkịtị ịtụle Chineke na mmụọ mmadụ dị ka mpaghara dị iche iche mana, Maltsev na-arụ ụka, nke a ezighi ezi ma na-eduga n'echiche zuru oke ma ọ bụ nke na-adịghị mkpa. Tupu ị jụọ ajụjụ banyere Chineke, Maltsev tụrụ aro ka anyị jụọ ma ihe a na-akpọ "mmụọ mmadụ" ọ dị.
Ebe mmalite iji zaa ajụjụ a bụ asụsụ dị iche iche. Maltsev kwenyere na Russian bụ otu n'ime asụsụ ndị kacha ochie n'ụwa ma jigide usoro okwu na ahịrịokwu pụrụ iche. Na Russian, otu okwu a na-ezo aka na “ike nke mmụọ nsọ.” Site na nke a, enwere ike ikwubi na njirimara kacha mkpa nke mmụọ mmadụ bụ ike ya. N'aka nke ya, okwu mbụ anyị nwere ike ime banyere Chineke bụ na a kwenyere na ya nwere ike karịa ụmụ mmadụ. N’ezie, ọtụtụ okpukpe na-akụzi na Chineke pụrụ ịta ụmụ mmadụ ahụhụ n’ihi mmebi iwu ha. Yabụ, na ndụ anyị anyị na-ahụ ma ike mmadụ anyị ma ọnụnọ nke ike karịrị nke anyị, Chukwu.
Mmuo ekwesighi ka aghara itinye uche na uche mmadu. Mmụọ bụ ọrụ maka ike, mmụọ maka ọsọ: otu otu ihe si eme ngwa ngwa. Ike onye ahụ na-etolite, ndụ ya na-adịwanye mfe karị, gụnyere ndị ọzọ na-achịkwa ọsọ. N'ụzọ ụfọdụ, ndị ahụ dị ike dịkwa ike karịa. Maltsev na-akọwa na ọ dịghị mkpa ka onye siri ike “gbaa ọsọ,” dịka mmadụ niile na-abịakwute ya, ebe onye na-adịghị ike kwesịrị ịkwaga mgbe niile, n’ihi na ọ nweghị ikike ike ga-adọta ndị ọzọ.
Mmụọ nwere ihe atọ: ike mmadụ, ike nke Chineke, na ebe nchekwa. Dị ka Jung gosipụtara, ebe nchekwa nwekwara ike ịbụ isi iyi nke ike na ike dị ukwuu. Ezigbo ọnọdụ ime mmụọ, Maltsev na-ekwu, kwesịrị ịbawanye ike na ike. Ihe ime mmụọ nke njedebe ya bụ ime ka anyị daa mbà abaghị uru ma ọ bụ ka njọ.
Site na ịjụ ajụjụ ọzọ otu anyị ga - esi amata ọdịiche dị n’etiti ikike mmadụ na ike nke Chineke, anyị ghọtara, Maltsev na-akụzi, na e nwere n’ezie Chineke atọ dị iche iche, ma ọ bụ opekata mpe echiche atọ dị iche iche nke Chineke (Maltsev 2014c).
Nke mbụ bụ Chineke na-eche n'echiche, ihe nnọchianya nke mmadụ na -emepụta mgbe ha lere anya "elu," na mbara igwe. Nke abụọ abụrụ Chineke dị na ncheta. Mgbe anyị leghachiri anya azụ, “kama "Elu," anyị ghọtara na amụrụ anyị, tupu a kụziere anyị otu esi eche echiche n'echiche ndị a, n'echiche nke ikpe ziri ezi, ọmịiko, na eziokwu. Nke a bụ "ọkụ nke Chineke" na ncheta mmadụ. Ma, ọ dịkwa Chineke nke atọ, onye Maltsev kpọrọ “Sgbọ mmiri Chukwu.” [Foto dị n'aka nri] N'ezie, Chineke a bụ usoro, mana anyị na-ahụ ya site na ihu onye isi ụgbọ mmiri anyị na-akpọ ọha mmadụ. Ndị nọ n'ụgbọ mmiri chọrọ nkà nke onye isi ụgbọ mmiri ahụ iji lanarị, n'agbanyeghị na ndị ọrụ ụlọ gụnyere ndị isi ọrụ dị iche iche na-enyere onye isi ụgbọ mmiri ahụ aka. Ihe omuma a na emegharia otutu oge n’ime ezinulo na otutu ulo oru na ndi otu. A na-emegharịkwa ya n'okpukpe, dị ka hipgbọ mmiri Chineke bụ Chineke kachasị mmadụ nso na nke ha na-ezute.
Nghọta nke onye ọ bụla gụnyere Chi atọ ahụ, mana a mụrụ anyị naanị na onyinyo nke abụọ, Chineke nke ncheta. Anyị na-ekepụta nke mbụ site n’echiche anyị, nke atọ bụ nsonaazụ nke ndụ na nkuzi nke nne na nna mmadụ ma ọ bụ ọha mmadụ. Maltsev na-ekwu na triangles na echiche Chineke nke hiwere isi na atọ, dị ka Atọ n'Ime Otu, dị n'ọtụtụ okpukpe.
Otú ọ dị, okpukpe dị iche iche na-azọrọ na Chineke dị iche n'onye ọ bụla. Maltsev kwenyere na Chineke na ụmụ mmadụ dị iche iche. Nke a apụtaghị na usoro Maltsev ekweghị na Chineke. Kama nke ahụ, ụmụ mmadụ bụ akụkụ nke Chineke, mana akụkụ ahụ enweghị ike ịdị na-enweghị ihe dum, dịka otu ahụ dum enweghị ike ịdị na-enweghị akụkụ ya. N'ezie, akụkụ nke ụmụ mmadụ bụ mmụọ. Ime ka mmụọ dị ike dị mkpa, n'ihi na ọ pụtara iwusi mmadụ ike, na-enweghị ịzụlite mmụọ mmadụ, enweghị ike, ncheta, na nka.
Banyere nlanarị mgbe ọ nwụsịrị, Maltsev na-ekwusi ike na anyị enweghị ihe akaebe doro anya ma nwee ike ịkọ nkọ. Ebe ọ bụ na a mụrụ anyị na ncheta na mmụọ, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ikwubi na ha na-adị ndụ. Anyị nwekwara ike ịkọwa na otu ha si adị ndụ jikọtara echiche kachasị mkpa nke Chineke onye ọ bụla nwere na ndụ. Rewardgwọ ọrụ ebighi ebi ma ọ bụ ntaramahụhụ jikọtara ya na Chineke mbụ. Gbọ mmiri Chineke ga-akpọ anyị ịbanye n'ụgbọ ọzọ site na nlọ ụwa. Ọzọkwa, ndị na-etinye ọnọdụ ime mmụọ ha na Chineke nke abụọ ga-enwe obi ụtọ na ọdịnihu nke dike, ya bụ na ịlanarị ogologo oge na ncheta nke ndị ọzọ.
Maltsev na-ejikarị okwu ahụ bụ "mysticism," mana ọ nwere ihe pụrụ iche. Na mbụ, ọ na-arụ ụka, na-eche echiche mystic dị ka usoro ihe ọmụma banyere ụwa, Chineke, na otu esi enweta ike na ikike n'oge ndụ anyị. Mysticism bụ sayensị nke ndị na-achị achị. Ọ malitere na sayensị nke oge a, ebe ọ bụ na e kere nsụgharị dị obere, okpukpe, maka ndị nkịtị. N'ịrụ ọrụ nke onye ọkà ihe ọmụma Gitali bụ Giambattista Vico (1668-1744), Maltsev kwenyere na, ebe ọ dịkarịa ala Rom oge ochie, e nwere ụdị ime mmụọ abụọ dị iche iche maka otu mmekọrịta dị iche iche. Chineke nke ndị na-achị achị na ndị agha na Chineke nke ndị nkịtị, dị iche iche, ma gboo mkpa dị iche iche.
Site na nyocha a, na site n'ọmụmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke Europe, Maltsev bịara na nkwubi okwu na e nwere ọdịnala atọ dị iche iche: Venetian, Rhine, na Athos. Omenala ọ bụla bụ ụzọ iche echiche na ime eme. Usoro Athos hiwere isi na Chineke mbụ, Rhine na nke atọ (Ship God), na Venetian na nke abụọ, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ndị Venetị maara na ịdị adị nke Chi atọ ahụ. Ndị eze ukwu Byzantine, bụ ndị jiri Chukwu mbụ na-achịkwa ndị ha, kere omenala Athos. Maltsev kwenyere na ọdịnala a taa na-arụ ọrụ nke ọma na Chọọchị Ọtọdọks nke Russia, onye njikọ ya na obodo ndị mọnk nke ugwu Athos dị na Gris bụcha ma nke miri emi. Omume Athos bụ ihe na-agafe agafe, na-achọkarị okwukwe, ma na-agba ndị na-efe ofufe ụjọ ka ha na-atụ egwu Chineke ha. N'ụzọ dị iche, ọdịnala Rhine na-arụ ọrụ, dị ka hipgbọ mmiri Chineke chọrọ ka a rụọ ọrụ dị irè, nke ga-adabere na ya kpee ụmụ mmadụ ikpe. Na mbu, ọdịnala Rhine malitere n'ime klaasị ndị ọchị, ọ bụ ezie na emesịa ọ gbasara ndị nkịtị. Nnukwu mgbanwe ndị Europe bụ nsonaazụ nke ọrụ nke usoro Athos, nke sitere na ya pụta n'ike, mana ọ bụghị ruo ogologo oge, dịka n'ikpeazụ onye iro ya gbara iyi, usoro Rhine, nwere ike ịmeghachi na ịlụ ọgụ mgbe niile.
Na ngwụcha, agbanyeghị, usoro Athos na Rhine bụ nke ọdịnala Venetị kere, naanị ya nwere ihe ọmụma banyere otu mgbagha Chineke atọ ahụ si arụ ọrụ n'akụkọ ihe mere eme mmadụ. Omenala Venetị bụ nke kacha sie ike na anaghị eme ebere. Ọ na-emekọ ihe banyere Chineke nke abụọ, Chineke nke ncheta, ma na-akụziri ụmụ mmadụ otu esi dị ike, nweere onwe ha, ma nwee amamihe. Ndị nnọchi anya ya na-ahọrọ mgbe niile ịrụ ọrụ na ndò. Usoro nke Venetian ghọrọ ihe a na-apụghị ịhụ anya kpamkpam na mgbanwe nke bourgeois, site na usoro nke sitere na narị afọ nke iri na isii na nke iri na asatọ, mana ọ tufaghị. Etu a ka esi wugharia otu o si aru oru site na imu ufodu omenaala ndi di na ala ebe o di ndu, gunyere ndi Sicilian mafia, ka ha ghara inwe mgbagwoju anya na omenaala ndi omekome nke Calabria di nso, nke a maara dika Ndrangheta, nke metutara Rhine karia usoro nke Venetian. N'ezie, istali bụ obodo nwere mmasị na Maltsev n'ihi na ọ kwenyere na ọ na-emetụta usoro nke usoro atọ a: Venetian dị na mgbago ugwu, Athos na etiti, na Rhine na ndịda, ebe na mba ndị ọzọ otu usoro doro anya.
Sciencestù Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụhụ abụghị usoro okpukpe, dịkwa ka nke a, enweghị usoro a kapịrị ọnụ. Dị ka ọ na-eme na otu dị iche iche, isonye na ngagharị ahụ pụtara ịga nzukọ ọmụmụ na ọmụmụ ihe, ụfọdụ n'ime ha n'ịntanetị. Ebumnuche maka ịga ọmụmụ ihe ndị a akpọtụrụ aha na ajụjụ ọnụ nke ndị na-abanyeghị na Ukraine na 2016 na 2018 gụnyere gụnyere mmepe ime mmụọ, inweta ihe ọmụma nke ga-eme ka ndụ ka mma, ịmụtakwu ikike ọhụrụ, ịbụ onye ọrụ dịịrị, na ọbụna ịnweta nnwere onwe ego.
Na mgbakwunye na nzukọ ọmụmụ na ọmụmụ ihe, ndị bụ akụkụ nke ime mmụọ nke usoro ahụ na-esonye na njem nyocha nke ubi Maltsev kpọrọ "njem mmụta sayensị," ebe ụmụ akwụkwọ ndị okenye nyeere ya aka ime nyocha ya, ma n'otu oge ahụ na-akụzi na gosiputara ihe omuma ya banyere akuko site na nleta ihe omuma, ihe ochie, na ihe omuma. [Foto dị n'aka nri] A na-emepụta ihe nkiri akwụkwọ ndị na-achịkọta ihe nile dị na nsonaazụ nke “njem” nke ọ bụla. N’agbata afọ 2013 na etiti 2018, “ndị agha ndị njem” mezue njem iri abụọ na asatọ ndị a na Germany, Austria, Italy, Greece, Turkey, Spain, Czech Republic, na United States.
N'ime oge ọ dị ugbu a, amụrụ mgbe Maltsev si na Sevastopol kwaga Odessa na 2014, thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Sayensị nke Sayensị Na-eje ozi dị ka nzukọ nche anwụ maka ụlọ ọrụ atọ dị iche iche abanye n'etiti 2015 na 2017 n'okpuru iwu Ukraine dị ka ụlọ ọrụ nzuzo.
Nke mbu bu International Schicksalsanalyse (ya bu “Fate Analysis,” na German) Community Research Institute, nke hibere n’abali isii n’ime onwa isii n’onwa iri n’ise n’onwa 6, n’agu mmuta akparamaagwa na omenala Szondi. Nke abụọ bụ Institutelọ Ọrụ Ncheta, nke e guzobere na June 2015, 14, nzukọ ọmụmụ na nkuzi maka ọdịnala chivalric, echiche esoteric nke akụkọ ihe mere eme, na ọnọdụ ime mmụọ. Nke atọ bụ Scientific Institute of World Martial Art Traditions Study and Criminalistic Research of Weapon Handling, tọrọ ntọala na Jenụwarị 2016, 24, nke na-amụ ma na-akụzi ọgụ ọgụ na usoro ejizi ngwa agha, ụfọdụ n'ime ha sitere na ọdịnala mpụ na ụwa niile.
Maltsev na-eje ozi dị ka onye isi nke Memory Institute, a na-ahụta ya dị ka onye isi nke otu ahụ. Maryna Illiusha bụ onye ntụzi nke Schlọ Ọrụ Schicksalsanalyse yana Evgeniya Tarasenko na-eje ozi dị ka onye ntụzi nke nzukọ nka agha.
Maltsev na-eche na nkuzi nke oge ochie, yana ngwa ọrụ ya, etinyere maka ntinye ọrụ, nwere ike ịnye nghọta ọhụrụ bara uru n'ọtụtụ ebe dị iche iche nke mmadụ, gụnyere sayensị, akụkọ ihe mere eme, azụmahịa, akwụkwọ akụkọ na omume nke iwu. Dị ka e kwuru na mbụ, ọ bụkwa onye gụsịrị akwụkwọ na ọkàiwu na onye ọka iwu, wee soro ya na onye ọrụ ibe Ukraine bụ Olga Panchenko nke Redut Law Firm. [Foto dị n'aka nri] O sitere n'ike mmụọ nsọ kee ihe nke Mpụ a na-edozighi online akwụkwọ akụkọ, na mbụ ewepụtara igbu ikpe na ugbu a na-arụsi ọrụ ike na-alụ ọgụ mgbochi òtù nzuzo na ndị ọzọ na-akatọ nke Applied Sciences Association.
Nzukọ ọmụmụ na ọmụmụ ihe na Ukraine na mba ụwa (gụnyere ndị ọzọ, ha emeela na Italytali, United States, Spain, na Turkey), ọtụtụ narị mmadụ agala, ma ọ bụrụ na a gụnyere nzukọ ọmụmụ Weebụ, ọtụtụ puku mmadụ nwere mmasị n'akụkụ dị iche iche ihe mkpakọrịta ahụ. Mkpakọrịta ahụ na-arụsi ọrụ ike na YouTube na Facebook. Isi "otu" (echiche anaghị adị mfe maka ụdị mmegharị a) pere mpe, mana ọ dị ka ọ na-abawanye. Enwere ụfọdụ ndị otu oge iri ise, ọtụtụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ site na otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
N'ihi nkwado nke gọọmentị n'oge ọchịchị Vladimir Putin dị iche iche, ndị na-emegide òtù nzuzo nke Russia apụtawo dị ka onye na-edu ndú n'ime obodo ndị na-emegide òtù nzuzo. Otú ọ dị, na mba ndị ọzọ na-emegide òtù nzuzo na-egosi onwe ya ndị okpukpe, na Russia, isi nzukọ ya, bụ Saint Irenaeus nke Lyons Center, nwere njikọ chiri anya na Chọọchị Ọtọdọks nke Russia. Onye ndu ya, Alexander Dvorkin, ghọrọ onye isi oche nke ikpe ziri ezi Ndị ọkachamara na Mgbakọ nke Na-ahụ Maka Nnyocha Ọmịiko nke Ọchịchị nke Ọchịchị, onye isi ihe nkiri na mkpọsa ahụ iji gbochie "òtù nzuzo" (Human Rights Without Frontiers Correspondent in Russia 2012). [Foto dị n'aka nri]
Na 2009, Dvorkin ghọrọ onye osote onye isi oche nke gọọmentị Europe na-emegide òtù nzuzo FECRIS. Ka nkwado akụ na ụba nye FECRIS site na mba ndị ọzọ na-akpọnwụ, akụkụ ndị Russia ghọrọ hegemonic na njikọ aka Europe. Nke a dịtụghị iche, n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emegide òtù nzuzo nke Europe bụ ndị okpukpe, ebe Dvorkin na-anọchite otu ngalaba nke Chọọchị Ọtọdọks nke Russia.
Na Russia, ndị na-emegide òtù nzuzo nwara ime ka mmekọrịta ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị sikwuo emi, n'emeghị ihe ndabere okpukpe ha. Onye ọnụ na-eru n’okwu banyere “òtù nzuzo,” bụ́ ọkà n’akparamàgwà mmadụ, Alexander Neveev, so n’otu n’ime atụmatụ “forlọ akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ọtọdọks nke Ọtọdọks” nwere.
Ndị Western na-emegide òtù nzuzo, na-enwe nsogbu akụ na ụba ma na-ebelata nkwado nke gọọmentị, na-enwekarị akụkọ ifo nke otu Dvorkin dị ka onye kachasị ikike na Russia. Nke a abụghị ikpe. Dvorkin nwekwara ndị nkatọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe okpukpe Russia, ọ dịkwa mkpa ichetara echiche ọha mmadụ banyere mkpa ọ dị site n'ịnọgide na-achọta "òtù nzuzo dị egwu" ọhụrụ.
Ọ bụ nke a ndabere na-akọwa belate "òtù nzuzo agha" nwunye nke mere na Odessa na 2014-2016. Na 2012, otu nwanyị a na-akpọ Maria Kapar gara otu n'ime ihe ọmụmụ Maltsev. na ya nwere obi ụtọ na ya. N'ezie, ọ gara n'ihu na-aga ọmụmụ ihe ruo ihe dị ka afọ abụọ. N'otu oge Kapar, mgbe ya na ndị otu sayensị na-emekọrịta ihe, boro ya ebubo na ọ na-eji aha otu ahụ eme ihe azụmaahịa ya na-akwadoghị na Odessa. Ka esemokwu ahụ rịrị elu, na 2014 Kapar kpọtụrụ Neveev na ikekwe Dvorkin, bụ onye (o doro anya na ọ meghị nyocha ọ bụla na otu ahụ) gosipụtara na ọ bụ onye "otu nzuzo" a na-ahụkarị.
Obi dị m ụtọ inwe ike itinye “òtù nzuzo” ọhụrụ na ndepụta ya, Neveev zipụrụ ibe Weebụ megide “Odessa Templars” (aha Maltsev anaghị eji). Ha boro otu ahụ ebubo, na ndị ọzọ, nke njikọta na Order of Knights Templar nke ochie, yana ịtọlite ​​otu ndị agha, ịmị ụbụrụ, aghụghọ, na ịkwa iko, ebubo niile eji eme ihe megide ọtụtụ "òtù nzuzo" na Russia na ebe ndị ọzọ.
Ndị Russia na-eme mgba okpuru kwukwara na Kapar kpọtụrụ ndị mgbasa ozi mpaghara na Odessa. Ọ hụrụ ụfọdụ ndị odeakụkọ ọkachasị mmegide nke "òtù nzuzo" na ndị ọzọ nwere mmasị na akụkọ na-akpali akpali, gụnyere Maria Kovalyova, Dmitry Bakaev, Vyacheslav Kasim, Evgenii Lysyi, Oksana Podnebesna. Edebere akụkọ mgbasa ozi ọjọọ dị iri isii na elektrọnik site n'aka ndị nta akụkọ isii. Fọdụ, dị ka Oksana Podnebesna, nwere ihe kpatara ibu iro megide utlọ Ọrụ Redut Iwu n'ihi ikpe mpụ (na-enweghị njikọ na Maltsev ma ọ bụ "òtù nzuzo") ụlọ ọrụ ahụ meriri n'aha ndị na-agbachitere ndị nta akụkọ ahụ dị ka ndị ikpe mara.
Ihe kacha dị njọ metụtara Yulia Yalovaya, onye ọrụ 20 dị na Redut Law Firm, na-arụkwa ọrụ maka Mpụ a na-edozighi akwụkwọ akụkọ. Nne ya gụrụ akụkọ ntanetị gbasara Scienceslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụike wee kpọtụrụ ndị na-emegide ndị Rọshịa bụ ndị, dị ka nwa ya nwanyị si kwuo, kwụrụ ụgwọ $ 12,000 maka ịkwụ ụgwọ "nnapụta" Yulia (Fautré 2016). Nwanyị ahụ rịọziri ndị uwe ojii ka ha kpọta Yulia n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii maka ịgba ya ajụjụ, na-azọrọ na "òtù nzuzo" na-akpọbata ya n'òtù “ịgba akwụna.”
Dvorkin na Neveev nwere ike ịdị ike na Russia, mana ndị enyi ha na Odessa amachaghị nke ọma ma ha nwere ike ịnata mana obere enyemaka nke ndị ibe ha Russia, ma ọ bụrụ na ọ bụghị site na isiokwu edepụtara na ịntanetị. A machibidoro Dvorkin n'onwe ya ịbanye Ukraine kemgbe 2014, n'ihi ọnọdụ ya n'okwu Donetsk. A tọhapụrụ Yulia Yalovaya n'ihi mbọ nke utlọ Ọrụ Redut Law na ndị odeakụkọ bụ ndị gbasaa akụkọ na-emegide òtù nzuzo gbasara Sciencestù Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ahụhụ metụtara. Lostfọdụ, dị ka Dmitry Bakaev, chụrụ ọrụ ha.
Mpụ a na-edozighi mepụta ihe nkiri docudrama, Chebe Yourgwù Gị, banyere okwu ikpe Yalovaya, bụ nke nwere nlele ndị dị mma n'ụwa niile na gburugburu oke ruru mmadụ, wee mebie ikpe na aha ọma nke ndị na-emegide òtù nzuzo. Ha okwu nduhie megide A na-edebe ndị otu na-ahụ maka sayensị metụtara na ndụ na webụ, mana ọ dị ka ọ anaghị egbochi ọganiihu nke otu a. [Foto dị n'aka nri]
N’ịtụle usoro okpukpe nke okpukperechi ndị Russia, nkatọ nke Maltsev banyere mmejọ akụkọ ihe mere eme nke Chọọchị Ọtọdọks bụ ihe dị mkpa n'ịkọwa ihe merenụ. Nsogbu dị n'ime nke ndị na-emegide òtù nzuzo na mkpa ọ dị ịchọta ndị ọhụrụ a ga-achụso bụ ihe ọzọ: n'otu oge, a kọwara ọbụna ụlọ ọrụ iwu dị ka Redut dị ka “òtù nzuzo”. Dịka nsogbu ndị a nwere ike ịga n'ihu n'ọdịnihu dị nso, ndị na-emegide òtù nzuzo ga-aga n'ihu na-akatọ Association nke Sciences metụtara, ọ bụ ezie na mmeghachi omume ya siri ike ma dị irè.
Foto # 1: Foto nke Viktor Pavlovič Svetlov.
Foto # 2: Oleg Maltsev.
Foto # 3: Léopold Szondi.
Foto # 4: Oleg Maltsev na-akuzi nka agha.
Foto # 5: Akwụkwọ nke akwụkwọ ahụ Bupu Chineke (2014).
Foto # 6: Maltsev na otu n'ime njem ndị sayensị ya.
Foto # 7: Olga Panchenko.
Foto # 8: Alexander Dvorkin.
Foto # 9: Esemokwu n'etiti Julia Yalovaya na nne ya n'ọdụ ndị uwe ojii na Odessa, site na fim ahụ Chebe Yourgwù Gị.
Fautré, Willy. 2016. “Ndị na-eso ụzọ onye isi mgbaka ndị Juu bụ Leopold Szondi nke onye osote onye isi FECRIS bụ Alexander Dvorkin boro ebubo na o nwere‘ Otu Okpukpe. ’” Human Rights Without Frontiers, September 5. Nweta site na http://hrwf.eu/ukraine-followers-of-jewish-psychiatrist-leopold-szondi-accused-by-fecris-vice-president-alexander-dvorkin-of-belonging-to-a-cult/ na 11 September 2017.
Hughes, Richard A. 1992. Nlaghachi nke Nna ochie. Bern: Peter Lang.
Ihe ndị ruuru mmadụ na-enweghị oke okwu na Russia. 2012. “FECRIS na Mgbakwunye ya na Russia. Otu Clekọchukwu Chọọchị Ọtọdọks nke FECRIS. ” Okpukpe - Staat - ụlọ ọrụ 2012: 267-306 [mbipụta pụrụ iche "Nnwere onwe nke Okpukpe ma ọ bụ Nkwenkwe, Mgbalị Ndị Na-emegide andka na Ọpụpụ Ọchịchị. Ihe Omume: FECRIS ”].
Maltsev, Oleg. 2017. Nwa Ogbenye. Odessa: Scientific Institute of World Martial Art Traditions Study na Criminalistic Nnyocha nke Ngwá Agha Ijikwa.
Maltsev, Oleg. 2016. Na Knife Gị: Knife na Omenala Criminal Russia. Odessa: Scientific Institute of World Martial Art Traditions Study na Criminalistic Nnyocha nke Ngwá Agha Ijikwa.
Maltsev, Oleg. 2014a. "Eziokwu": Egwuregwu nke na-achịkwa Okwu ahụ. Odessa: Institutelọ Ncheta.
Maltsev, Oleg. 2014b. Орога на Постамент. Nke a (Tozọ na Pedestal). Odessa: Institutelọ Ncheta.
Maltsev, Oleg. 2014c. Орабельный Бог (Hipgbọ mmiri Chineke). Odessa: Institutelọ Ncheta.
Maltsev, Oleg, na Jon Rister. 2016. Ahụhụ Ebighị Ebi: Ọdịnala Mpụ nke Mexico. Odessa: Scientific Institute of World Martial Art Traditions Study na Criminalistic Nnyocha nke Ngwá Agha Ijikwa.
Maltsev, Oleg, na Tom Patti. 2017. Ihe na-emebi emebi Pendulum. Odessa: Seredniak TK